बैतडीका पाँच स्थानीय तह अझैं अन्धारमय ! - Everest Dainik - News from Nepal
बैतडीका पाँच स्थानीय तह अझैं अन्धारमय !
बैतडी, भदौ १८ । जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष बढी भइसक्दासमेत अझै पनि बैतडीका अधिकांश स्थानीय तह अभावै अभावमा चलिरहेका छन् । जिल्लामा रहेका १० स्थानीयतहमध्ये आधा स्थानीय तह विद्युतविहीन छन् ।
चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका रहेको यहाँ पाँच वटा स्थानीय तहका सदरमुकाम अझै विद्युत्को पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । जसमा एक नगरपालिका र चार गाउँपालिका विद्युत्विहीन रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस स्वास्थ्य चौकीलाई जग्गादान
विद्युत् लाइन नहुँदा दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत समस्या भएको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले जानकारी दिए । ‘विद्युत् नहुँदा गाउँपालिकामा इन्टरनेटसमेत जडान गर्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘गाउँपालिका कार्यालयमा सोलार बत्ती रहेको भए पनि वर्षात्को समयमा घाम नलाग्दा सोलारले काम गर्न छोडेको छ ।’
जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका सिगास गाउँपालिकामा पनि विद्युत् नहुँदा कार्यालयले गर्ने नियमित कामकाजमा समेत समस्या हुने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए ।
याे पनि पढ्नुस बैतडीमा ४ वर्षमा ११५ जनाले आत्महत्या
बिजुली बत्ती नहुँदा सोलार बत्तीको भरमा स्थानीय तहले कार्यालयमा सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्दा समस्या हुने गरेको छ । सोलार बत्तीले घाम परेका बेला मात्रै काम गर्ने र घाम नपरेको बेला काम नहुने हुँदा दैनिक कामकाजमा समस्या हुँदै आएको पुर्चौडी नगरपालिकामा उपप्रमुख जानकी बमले बताए ।
डिलाशैनी गाउँपालिकामा पनि विद्युत् नहुँदा कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्रमा विद्युत् नभएको सेवाग्राहीले भनेको समयमा सेवा दिन नसकिएको वडा नं १ का वडा अध्यक्ष अक्कल रानाले बताए ।
याे पनि पढ्नुस आगलागीमा परी बैतडीमा एकै परिवारका ३ जनाको ज्यान गयो
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका लघु जलविद्युत् आयोजना पछिल्लो समय धमाधम बन्द हुन थालेपछि स्थानीय तहले विद्युत्को समस्या झेलिरहेका हुन् । जिल्लामा रहेका १९ वटा लघु जलविद्युत् आयोजनामध्ये अधिकांश बन्द अवस्थामा छन् । सञ्चालनमा रहेका लघु जलविद्युत् आयोजना पनि रातको समयमा सञ्चालन हुने भएकाले सरकारी कार्यालयमा कामकाजका लागि उपयोग गर्न पाइएको छैन । –रासस
ट्याग्स: baitadi, अन्धारमय